ကဲ စလိုက်ကြရအောင် (Right, if we could start now by Guy Perring) - Myanmar Network
ကဲ စလိုက်ကြရအောင် (Right, if we could start now by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on May 29, 2012 at 18:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ဦးဆောင်ကျင်းပနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို အဖွဲ့အစည်းတွေက အထူး တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးလုပ်ရာမှာ အစပိုင်းက အရေးကြီးတယ်။ ဦးဆောင်သူအနေနဲ့ အစည်းအဝေးရဲ့ စုစည်းစီစဉ်ပုံ၊ သဘောတူညီထားတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ သွေဖည်မသွားစေဖို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို အစည်းအဝေး အစပိုင်းမှာ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစည်းအဝေးဦးဆောင်ကျင်းပသူက အဖွင့်အမှာစကား ပြောတဲ့အခါ အောက်ပါ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
• အားလုံး အာရုံစူးစိုက်ကြစေဖို့ စနစ်တကျ နေရာယူကြဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း
• တက်ရောက်သူများကို ကြိုဆိုပြီး လာရောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း
• အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
• အစည်းအဝေး အစီအစဉ်နဲ့ သတ်မှတ်ချိန်ကို ပြောကြားခြင်း
• တက်ရောက်သူများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အသီးသီးကို သတ်မှတ်ခြင်း
အစည်းအဝေးစတင်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ လေ့လာထား သင့်တဲ့ စကားစုတွေကို စာလုံးမဲနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
“Right, if we could start now. First of all, I’d like to welcome you all to Boomboom Industries and, in particular, our guests from our regional offices in Europe and Asia. As you will be aware, we’ve called this meeting in order to clarify some of the issues arising from our 2010 strategy. I trust you all haveacopy of the agenda and the meeting should take about two hours, so I aim to finish by 12.30 at the latest. Johan has agreed to take the minutes and Peter is going to give us some background.
So Peter, would you like to start?”
“ကဲ စလိုက်ကြရအောင်။ ပထမဆုံး တက်ရောက်လာသူများအားလုံး အထူးသဖြင့် ဥရောပနဲ့ အာရှ ဒေသအဆင့် ရုံးများမှ ဧည့်သည်များကို Boomboom Industries မှ ကြိုဆိုကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ တက်ရောက်လာသူများ သိကြပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ် မဟာဗျူဟာကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကိစ္စရပ်အချို့ကို ရှင်းလင်းဖို့ ဒီအစည်းအဝေးကို ခေါ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက် လာသူများကို အစည်းအဝေး အစီအစဉ် တစ်စောင်စီ ပေးဝေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး ကြာမြင့်ချိန် ကတော့ ၂နာရီလောက် ဖြစ်မယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၂နာရီခွဲ နောက်အကျဆုံး အစည်းအဝေးပြီးဖို့ မှန်းပါတယ်။ ယိုဟန်က အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းရေးမှာ ဖြစ်ပြီး ပီတာက နောက်ခံ အချက်အလက် အချို့ကို ပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ပီတာ၊ ပထမဆုံး ခင်ဗျားအလှည့်ပါဘဲ။”
ဒီအဖွင့်အမှာစကားမှာ အစည်းအဝေး ဦးဆောင်ကျင်းပသူအနေနဲ့ အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်အောင် စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစည်းအဝေးကို ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ခန့်ခန့်ညားညား ပြောကြားရာရောက်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ ပုံမှန် ဌာနခွဲ ဒါမှမဟုတ် ဌာနတွင်း အစည်းအဝေးတွေမှာတော့ ပိုပြီး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို သုံးနှုန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း တိုတိုတုတ်တုတ် သွက်လက်ပေါ့ပါးတဲ့ အဖွင့်စကားမျိုးဆိုရင် သင့်တော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“OK, let’s start. Thanks for coming and you all gotacopy of the agenda by e-mail. Let’s try and finish by 11. First item on the agenda is recruitment, Kalsom?”
“အိုကေ၊ စ လိုက်ကြရအောင်။ အစည်းအဝေးတက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အားလုံးကိုလည်း အီးမေးလ်နဲ့ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ပို့ထားပါတယ်။ ၁၁ နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး အစည်းအဝေးကို အပြီးသတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။ ပထမဆုံး အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကတော့ ၀န်ထမ်းခန့်ထားရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကာလ်ဆမ်က ပြောပါဦး။”
အစည်းအဝေးတစ်ခု ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားရခြင်း အကြောင်းရင်း တစ်ခုကတော့ သဘောတူညီထားတဲ့ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကနေ သွေဖည်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆောင်ကျင်းပသူရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ဆွဲယူပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်းအချို့ကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
I think we are getting sidetracked here, let’s get back to the agenda. လမ်းလွဲနေပြီထင်ပါတယ်၊ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အတိုင်း ဆွေးနွေးကြရအောင်။
လိုရင်းမဟုတ်တော့လဲ တခြားရောက်ကုန်ပြီ ထင်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အတိုင်း ပြန်ဆွေးနွေးရအောင်။
It’s an interesting discussion, but perhaps we can save it foraseparate meeting. ဆွေးနွေးကြတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သီးခြား အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး ပြောရအောင်လား။
အစည်းအဝေးဦးဆောင်ကျင်းပသူက အချိန်ကိုလည်း သတိထားပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြဖို့ သတိပေးရပါမယ်။
I’m wary of the time, so can we move on to item3on the agenda?
အချိန်ကို ငဲ့ရမှာမို့ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် အမှတ် ၃ ကို ဆက် ဆွေးနွေးကြမလား။
Time is running short, so shall we turn to the next item?
အချိန်သိပ်မကျန်တော့တဲ့အတွက် နောက်အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကို ဆက်လိုက်ကြမလား။
ကောင်းမွန်တဲ့ အစည်းအဝေးဦးဆောင်ကျင်းပသူတစ်ဦးအနေနဲ့ တက်ရောက်လာသူအားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေး နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ နှုတ်နည်းတဲ့ တက်ရောက်လာသူတွေကို ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ အားပေးရာမှာ “you’ve been very quiet” “အရမ်းတိတ်ဆိတ်နေပါလား” “we haven’t heard from Ting Ting yet” “တင်တင်က ဘာမှ မပြောသေးဘူးနော်” စသည်ဖြင့် နှုတ်ဆိတ်နေသူကို သိသာထင်ရှားအောင် ပြောဆိုတာကတော့ မကောင်းပါဘူး။ အဲဒီလို ပြောမယ့်အစား သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ သူတို့တွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ဒါမှမဟုတ် ထင်မြင်ချက် တန်ဖိုးရှိကြောင်း ထင်ရှားသိသာအောင် ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။
You have knowledge in this field, Mei. What’s your view?
မမေကတော့ ဒီအပိုင်းမှာ နားလည်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ မမေ ဘယ်လို မြင်သလဲ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အစည်းအဝေးဦးဆောင်ကျင်းပသူက အစည်းအဝေးကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ အပြီးသတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Well, can I draw the meeting toaclose now? Let’s review the main points of our discussion. We decided that ... Yoong, you are going to check ... Thank you, that’s all for today.
ကဲ အခု အစည်းအဝေးကို အပြီးသတ်ပါတော့မယ်။ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အဓိကအချက်တွေကို ပြန်ကြည့်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့တာတွေကတော့ ... ယွန်းက ... ကို စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကနေ့အစည်းအဝေးကတော့ ဒီလောက်ပါဘဲ။
British Council မှ Guy Perring ၏ Right, if we could start now အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။
Permalink Reply by 154n22s6vyex5 on May 31, 2012 at 8:16
Permalink Reply by Zaw Win on May 31, 2012 at 9:28
We could learn usages of meeting.
Please share more and more.
Permalink Reply by 0p90mru1j2xa4 on May 31, 2012 at 9:48
Thanks you so much for your Posted and these words are useful for me. Haveagood times
Permalink Reply by Nilar on May 31, 2012 at 9:55
i like and noted
Permalink Reply by Aye Aye Win on May 31, 2012 at 10:16
Permalink Reply by The` Su Mon on May 31, 2012 at 14:12
Permalink Reply by zawwinhtut on May 31, 2012 at 14:48
Permalink Reply by 2g5pixfu0mtz4 on May 31, 2012 at 15:36
Permalink Reply by 1apohufn0szka on May 31, 2012 at 16:24
I like this so i noted that.Thaks
Permalink Reply by columbanlasa on June 1, 2012 at 13:56
Permalink Reply by Ma Than Kyi on June 1, 2012 at 14:26
Permalink Reply by htarsusukyawshein on June 1, 2012 at 15:28